Bishnu Sharma: धत ! यस्तो पनि ओस्कर अवार्ड हुन्छ ?
एसियाली दर्शक ओस्करबाट प्रभावित नहुनुमा दुई कारण प्रमुख छन् । पहिलो –यसपटक अवार्डमा छानिएका ९८ प्रतिशत फिल्म एसियाली बजारमा रिलिज नहुँदा दर्शकले हेर्नै पाएका छैनन् । अब नहेरेको फिल्मलाई लिएर कसरी मजा लिने ? दोस्रो –एसियाली दर्शक मसाल अर्थात पपर्कन फिल्म हेर्नुमा जति मजा लिन्छन् ‘लिंकन’जस्तो सिरियस स्टोरीमा उनीहरूलाई मतलब छैन र पैसा तिर्न चाहँदैनन् । किनकी ‘लिंकन’ अमेरिकाको कथा हो, अब्राहम लिंकनको गुणबाहेक त्यो फिल्मसँग एसियाको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । ताइवानकै ‘लाइफ अफ पाई’ले केही बिजनेस त ग¥यो तर त्यो सबथोक होइन ।
चीन, ताइवान, भारत, कोरिया र जापानजस्तो मुलुकमा एक्सन, कमेडी र लोकल गुणका फिल्म प्रीतिकर लाग्छन् । तर, यसपटक ओस्करमा छानिएका अधिकांश फिल्म एक्सन र कमेडीयुक्त छैनन् । यसपटकको ओस्कर वैकल्पिक धार अर्थात आर्ट्स फिल्ममा टिकेको छ । हामीले यसपटकको ओस्करमा खोज्ने सान्दर्भिकता र औचित्य भनेको हलिउडको स्टोरी टेलिङ नै हो । यसका लागि आउँदो आइतबार सम्म त कुर्नैैपर्छ । आज मंगलबार एकाविहानै स्टार वल्र्ड च्यानलमा ‘टाइटानिक’लाई फेरि हेरेपछि मेरो ओस्कर ज्वरो भने बढेकै छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:07 AM